Thursday November 14, 2019 - 20:38:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dowladda Kenya uga tanaasulay dacwaddii dhanka badda ee horay loogu gudbiyay maxkamadda ICJ.
Kadib kulan albaabadu u xiranyihiin oo Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo ay ku yeesheen magaalada Nairobi ayay labada dhinac isku afgarteen in dib loosoo celiyo xiriirkii u dhaxeeyay labada dowladood islamarkaana kiiska dacwada badda lagasoo wareejiyo maxkamadda ICJ.
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Federaalka ay ka tanaasushay dacwadii badda ee tiillay maxkamadda ICJ.
Monica Juma oo ah wasiiradda arrimaha dibadda Kenya ayaa warbaahinta u xaqiijisay in Farmaajo uu ogolaaday in dacwada badda labada dowladood si hoose uxallistaan laganasoo wareejiyo maxkamadda ICJ.
"Labada madaxweyne waxay isla garteen in xiriirka labada dal dib loosoo celiyo dacwada baddana qaab ka baxsan maxkamadda ICJ loo xalliyo" sidaas waxaa tiri wasiiradda arrimaha dibadda Kenya.
Dowladda Federaalka ayaa isku dayday in ay marin habaabiso tanaasulay Farmaajo uu ka sameeyay arrinta baddan, qoraal kasoo baxay afhayeenka madaxtooyada oo saxaafadda loo qeybiyay ayaa lagu sheegay in kiiska badda uu sidiisi yahay.
Madaxtooyada dowladda Kenya ee magaalada Nairobi ayaa dhankeeda xaqiijisay tanaasulka Farmaajo ee badda Soomaaliya "Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu muujiyay kalsoonida uu ku qabo in dacwadda badda ee labada dal ee ICJ in lagu xaliyo qaab la isla ogolyahay ka hor maxkamadda cadaaladda aduunka ee Hague” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xafiiska Uhuru Kenyaatta.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa caan ku ah in dowladaha shisheeye ay ugacan geliso barriga iyo badda shacabka Soomaaliyeed, dowladdan oo ladhisay sanaddii 2004 ayaa dalka kusoo hoggaamisay kumanaan ciidamo shisheeye ah oo ay kamid yihiin Itoobiyaan iyo Kenyaanti dhulboob wada